Uphengululo - Popular Jewelry
Ngokusekelwe kwiingxelo ze-260
Intsapho yePuffy Heart Charm Pendant (Isilivere)
UDandy Ng (ENew York, eUS)
Isongo seCharm yoSapho, Ndiyithande!
ndiyithengele uDade wethu ngePopcorn Bracelet yakhe, kwaye iyakulingana! Isongo sakhe sasiyi-4.2mm!
Isiciko seHalo sikaYesu esisentloko (14K)
UJavier Morales (I-Asbury Park, e-US)
14k ezimbini ithoni jesus piece
Isiqwenga sokuqala sasibuyiselwe umva. Banikela ngoYesu ngesiqwenga esasibiza kakhulu ngexabiso elifanayo.
Ndilapha ngosuku olulandelayo emva kokuba inqanawa iphume. Yonke into yayidluliswa ngumthunywa kwaye yaqhubeka ibulela kakhulu kumthengisi. Isiqwenga sikaYesu sasinzima kwaye siqinile. Ndiyithande ngcono kuneqhekeza elixhaswe ngasemva. Kucetyiswa kakhulu. Awuyi kudana. Umthengisi omkhulu.
Umdibaniso weToni ezimbini eziQinisekisiweyo / iKhonkco leKhonkco laseCuba (14K)
UCATHERINE RIVERA (IPort New Richey, eUS)
UTHANDE UMJIKELO WAM
Popular Jewelry yenze kwalula kakhulu kum uku-odola ikhonkco lam kwi-intanethi. Unxibelelwano lwalubalasele. Ndibaxelele into endiyifunayo kwaye bazifezekisa iimfuno zam. Umtya wam wegolide we-14K ugqibelele. Ndiyayithanda kakhulu. Ndifumene ikhonkco lam kwakwiveki enye endiyalele ngayo. Inkonzo yoMthengi egqibeleleyo. Enkosi
Ndikhulele eBrooklyn, NY kwaye zonke izacholo zam zathengwa eCanal St eManhattan, NYC. Ngoku ndihlala eFlorida kwaye andisokuze ndithenge igolide ye-14k eFlorida. Ukuba ndifuna igolide, ndiya kuyithenga KUPHELA Popular Jewelry. Enkosi kubafana ngayo yonke into.
I-Bezel Evil Eye Pendant (14K)
UOmar Lopez (Glendale, eUS)
Inkonzo entle !!
I-Iced Out of I-David Hamsa Hand Pendant yesilivere
UBenjamin Marks (EBrooklyn, eUS)
U-Kevin wayeluncedo kakhulu ngokundinceda ukuba ndiqiniseke ukuba umgcini wam ojongiweyo ubekwiimpawu zam. Emva koko ndayifumana ngeposi ngosuku olulandelayo! I-PJ kuphela kwendawo endiza kufumana kuyo ubucwebe bam, kwaye ngesizathu esivakalayo.
I-Italiya eqinileyo yaseCuba yaseCuba / evulekileyo yeKhonkco (14K)
Ixesha elincomekayo / ikhonkco kunye neNkonzo emangalisayo 5/5 STARS
UKevin noWilliam babeluncedo olukhulu ngokumangalisayo kwaye bandixhasa kuyo yonke imibuzo yam malunga nependant yam kunye nekhonkco (ubude obahlukeneyo, amatyathanga, ipendenti, ubungakanani, njl.
Ukuba ujonge ukuthenga ubucwebe, yile ndawo yokwenza njalo. Uya kuyiphendula yonke imibuzo yakho kwaye amaqhekeza mahle. Ndiza kubuya ndiyokuthenga ubucwebe obuninzi. (Musa ukoyika ukubuza kwiijingi okanye amatyathanga athengisiweyo!)
Kukho isizathu sokuba iivenkile zakho zobugcisa ozithandayo zenziwe Popular Jewelry! Enkosi kwakhona uKevin noWilliam ngokwenza ukuthengiselana kwam kube mpuluswa kwaye baphendule yonke imibuzo yam!
Ball Stud Impumlo ukugqobhoza (14K)
Samia Zaman (IHyattsville, eMelika)
Bandixelele ukuba ndibhatale i-75 yeedola ngeempumlo zegolide emva koko basika iidola ezingama-75 kum kwaye bandinika ipini yempumlo engeyiyo. Ivenkile embi kakhulu. Beba imali ebantwini abayalele ukuba baqokelele kwi-intanethi.
Molo Samia! Ngaba uya kuba nakho ukusazisa ngendlela ogqibe ngayo ukugqobhoza impumlo ukuba ibe yinyani? Ukusukela kwixesha lethu lokuvula (ngo-1988) ukuza kuthi ga ngoku asikaze sijongane nezinyithi zokuhombisa iimpahla. kukho i-0% ithuba lalo naluphi na umxube olwenzekayo ke sifuna ukuva icala lakho ebalini. Ukuba iphawulwe njenge-14K- ungabheja ngokuqinisekileyo ukuba ufumene isitovu sempumlo segolide se-14K.
Idayimani-Sika iiHockey Sticks kunye nePuck Pendant (14K)
UJames Reinhardt (IHyattsville, eMelika)
Ukugqibelela. Ngaba uza kuphinda uthenge kwakhona.
Umphengululi wasePiramidi wase-Egypt wokususa i-Pyramid (14K)
IJordani R (ENorcross, eUS)
Awunakucela ipendenti ebhetele
UKevin kunye nomntu wonke phezulu Popular Jewelry undikhathalele kwaye waqinisekisa ukuba ndiyifumene i-odolo yam ASAP. Iza ngokukhawuleza kwaye ndinombulelo ongazenzisiyo ngesiqwenga sam. Enkosi 🤲🏽
Isongo esiqinileyo seMiami Cuban (14K)
ULuis Montilla (IDallas, iUS)
Ingcwele yeLazarus Pendant (14K)
UMarqueeta Jones (EWashington, eUS)
Khange ndiyikhathalele indlela endiphathwe ngayo kwaye khange ndiyifumane imali yam ebuyiswayo kubonakala ukuba kuya kufuneka ufunde ukuprinta okuhle abanenkwenkwezi enye kuba akukho ziro kodwa ufumana oobhontsi aba-4 ezantsi
Molo apho iMarqueeta! Ukuchaza- intlawulo yokubuyisela kwakhona isendaweni njengeeprosesa zokuhlawula (okt iinkampani zamakhadi etyala; iPayPal) zisibiza imali engabuyiswayo ngalo lonke ixesha umthengi esihlawula. Ngapha koko kukho iindleko ezinxulumene neposi kunye neinshurensi; ixesha / umsebenzi ofunekayo ukulungiselela nokuzalisekisa iodolo yakho. Ezi ndleko zongeza ukuya kuthi ga kwi-15% yexabiso lilonke lesiqwengana; yiyo loo nto iipesenti ezili-15 zomrhumo.
Ngokuchasene nokuchaphazela kwakho sifuna ukuba abathengi bazi malunga nezinto abazithengayo; Akukho mntu uthanda ukuhlawula ezi ntlawulo kwaye asikuthandi nokunyanzela abathengi bethu nokuba! Ngesi sizathu, imilinganiselo yesayizi ngqo yesiqwenga idweliswe kwiphepha layo; sikwanesiphakamiso kwiphepha ngalinye lokuthumela i-imeyile nayiphi na imibuzo ngokubhekisele kubungakanani ngaphambi kokuthenga. Ndiyaphendula!
Njengoko sinephepha elipheleleyo elinikezelwe kumgaqo-nkqubo wethu wokubuya kwaye andinakutsho ngokufanelekileyo ukuba liprinta kakuhle. Iiprosesa zokuhlawula zihambelana nomxhasi kakhulu xa kukho ukuthandabuza kodwa kulo mzekelo, bayigcinile intlawulo (oko kuthetha ukuba bakholelwa ukuba kufanelekile.) Nceda ube nokuqonda!
Isilivere yokuPhuma kwiPlagi yeSilivere
U-Ernest Thomas (IPhiladelphia, eMelika)
Umthengi weArt Deco Garnet uMnqamlezo (14K)
UChristopher Lovesky (ISt. Petersburg, eMelika)
Nokuba bhetele kuBuntu
Isiqwenga somgangatho esihle kwaye sijongeka ngcono kuneefoto. Iqela lalinceda kakhulu kuyo yonke le nkqubo. Ngokuqinisekileyo uya kufumana iziqwenga ezininzi kwi-PJ kwixa elizayo.
Amanqindi eGloves Boxing
Umtsalane omkhulu wamanqindi ujongeka ngathi sisiphatho segolide segolide sokuqala
UJoe Lopez (EMelbourne, eUS)
Eyona jeweler ijikeleze
Ndithumele iqhekeza lam ngebhokisi yesipho kunye nayo yonke igolide eyi-14k… .Bendingumthengi wakhe iminyaka kwaye ndizakuqhubeka nokuba ngumthengi wobomi bonke ... izandla phantsi kweyona jeweler intle ejikeleze i-ASAP EVA
Isakhelo seGuadalupe Pendant (14K)
UShaquille R (ENew York, eUS)
Ijongeka ngcono nangakumbi emntwini
[I-Lobster Lock] Solid Miami Cuban Chain (14K)
Skylar Crisp (IBirmingham, eUS)
Ndiyayithanda ndiyinxiba yonke imihla🙏🏾
ULynette Fitzpatrick (Elk Grove, eUS)
Isacholo esihle nesihombiso !!
Ndiyayithanda ikhonkco lam elitsha kunye ne-pendant super happy with my Hero buying !!
I-Spiga / I-Chain Wheat Chain (14K)
UJee Tea (EWashington, eUS)
Isacholo somqala esenziwe ngeGolide
Umgexo kunye ne-pendant yayifezekile! Ukuphendula kakhulu bendonwabile
I-Miami Cubanlink Chain Isilivere (Etyheli)
yessica (IGrosse Pointe, eMelika)
wenze isipho esihle kumzala wam omncinci, wothuka kakhulu. enkosi popular jewelry!
Isongo sePuffy Mariner Twist (14K)
UGlenn Harris (IBronx, eUS)
Uhlobo lweNtaliyane yoThungelwano lweNtloko yeTaliyane
Ubungakanani obugqibeleleyo kwaye buyamangalisa
I-Iced-Out Ankh Prong Pendant Isilivere
UAlex W. (IAshville, eMelika)
Bendingalindelanga ukuba amatye abethe njengokuba enzile, ixesha elimnandi lokuziva unesilivere esihle! Iya kakuhle kwintambo yam engama-22in.
Inkonzo yabathengi evela apha yayihle. Babengenayo ngqo i-ankh endiyi-odoleyo, kodwa uKevin wandirhintyela ngohlobo olukhulu, olutsha ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo! Kucetyiswa kakhulu ukuba kuthengwe i-yall popular jewelry!
Ijikelezo leShaneli eliJikelezileyo lokubeka i-Silhouette Heart Virgin i-Mary Pendant (14K)
Nokuba bhetele emntwini
I-Blue Opal Chain (Isilivere)
UKaelan Aubrey (IOttawa, CA)
Oku kuseta kumhle njengowasetyhini endikuthengele oku, kujongeka kulunge ngakumbi emntwini, kukhazimla kwii-opals.